I-Panoramic Seaview Holiday Escape e-Carvoeiro Algarve
I-iyunithi yokuqasha ephelele ibungazwe ngu-Elizabeth
Le ndlu yedolobha itholakala phezulu kwamawa abheke indawo yolwandle edumile yaseCarvoeiro. Ibekwe egunjini elincane lezindlu zamadolobha namafulethi, leli gumbi elihle lokulala le-2, indawo yokugezela eyi-1.5 inekhishi elihlome ngokuphelele kanye nohlelo oluvulekile lokuhlala negumbi lokudlela. Le ndawo ingenye yezindlu zasedolobheni ezinkudlwana futhi inethala elikhulu elizimele elilungele ukushiswa ilanga. Ichibi okwabelwana ngalo elinokubukwa okumangalisayo nge-Carvoeiro kanye ne-cove yayo yomdabu yesi-Portuguese kanye nolwandle.
**Ngaphansi kokuphatha okusha, ngaphambilini i-Cliff-top Holiday Escape**
Itholakala endaweni ethule ye-cliff-top condominium ngaphezu kosebe lolwandle, leli gumbi elihle lokulala eli-2, ikhaya leholide lokugezela elingu-1.5 linekhishi elihlome ngokuphelele kanye nohlelo oluvulekile lokuhlala negumbi lokudlela. Ikhaya liphinde libe nethala elikhulu elizimele eliphezu kophahla elilungele ukushiswa ilanga.
Ichibi okwabelwana ngalo linokubukwa okumangalisayo kweCarvoeiro kanye ne-cove yalo nolwandle. Ukubuka kwe-panoramic yoLwandlekazi i-Atlantic phansi kogu lwe-Algarve kusukela ethafeni eliphezu kophahla kungabonakala futhi kusukela ekamelweni elikhulu kanye namafasitela ekamelo lokuphumula.
Igumbi lokulala elikhulu linombhede osayizi omkhulu wenkosi, ikhabethe lezingubo elakhelwe ngaphakathi kanye nedeski. Igumbi lokulala lesibili linombhede osayizi omkhulu wenkosi noma imibhede engu-2 eyodwa.
Igumbi lokugezela elikhulu lineshawa enkulu yokuhamba ngezinyawo. Igumbi lezingubo/impushana esitezi esikhulu linendlu yangasese, usinki nesibuko.
Ukugcinwa kwezindlu kunikezwa ngaphansi kophawu lwesiPutukezi lwekhwalithi "Hlanza Ukuphepha" oluqinisekisa ukuthi yonke imihlahlandlela kahulumeni ilandelwa ngezinga eliphezulu kakhulu.
Itholakala emaweni, indlu ifinyelela kalula (imizuzu emi-3 yokuhamba) ukuya ogwini kanye nedolobha elinemigoqo yalo, izindawo zokudlela nezitolo.
Endaweni kunezinhlobo ezahlukene zamakilasi egalofu, amapaki etimu, amapaki amanzi, iklabhu yethenisi, ukugibela amahhashi kanye nemidlalo yasemanzini. ICarvoeiro Boardwalk ingaphakathi kohambo lwemizuzu eyi-10 ukusuka kule ndawo lapho ungehla khona ezitebhisini ezakhiwe eweni.
Phakathi nohambo olufushane lwemoto (cishe imizuzu eyi-15) ungafinyelela olwandle oluhle lwaseCarvalho lapho uzozizwa njengomhloli wangempela wamazwe. Izingane zizothanda ukuthola izitebhisi ngokusebenzisa imigudu emibili efihliwe eweni ukuze zifike ogwini.
Kalula nje, ungashayela uye e-Benagil lapho ungajabulela khona ukuhamba ngezinyawo eziqongweni zamawa noma uthathe uhambo lwesikebhe usuka eCarvoeiro uye emigedeni yaseBenagil.
Amanye amabhishi aseduze afaka iPraia da Marinha nePraia de Vale de Centianes.
Ujabulele ukuthenga? Vakashela isikhungo sokuthenga se-Aqua e-Portimão entshonalanga ye-Carvoeiro noma i-Algarve Shopping mall e-Guia (eduze kwase-Albufeira) empumalanga (zombili imizuzu eyi-15 ukusuka ngemoto). Zonke zitholakala kalula ngemoto, kodwa ngenxa yesimo sokuphumula esinokuthula esikuzungezile, ungase unqume ukungalokothi uhambe.
U-Gianny engibambisene naye uhlale etholakala nganoma imiphi imibuzo ngesikhathi sokuhlala kwakho. Uzokusiza kunoma yiziphi izinkinga futhi ahlele ukuhlangana nokubingelela ngokufika kwakho.
IZIDINGO ZE-SEF: Bonke abanikazi bezakhiwo e-Portugal banemfuneko engokomthetho yokubika ulwazi lwabavakashi nolwazi lwezivakashi ku-Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF). Lapho ubhukha, sizokuthumelela ifomu le-SEF elingenalutho ukuze uligcwalise futhi ulibuyisele kithi ngaphambi kokufika kwakho. Kuyimfuneko eyisibopho.
U-Gianny engibambisene naye uhlale etholakala nganoma imiphi imibuzo ngesikhathi sokuhlala kwakho. Uzokusiza kunoma yiziphi izinkinga futhi ahlele ukuhlangana nokubingelela ngokufi…
Inombolo yepholisi: 38178/AL